Excavator ịwụ, Excavator ripper, Excavator ngwa ngwa di na nwunye - MINYAN
excavator MINI akpa
excavator AKWIEKWỌ AKW .KWỌ
excavator n'etiti akpa
excavator AKWETKWỌ AKWETKWỌ
gbasara Anyị Kedu ihe na-esote?
atụmatụ eji akụrụngwa
Ogo Ogo, Ahịa Nke Mbụ, Ebe E Si Nweta Mbụ
Anyị na-tumadi rụpụta nile di iche iche nke excavator ịwụ, dị ka Mini ịwụ, earthwork ịwụ, nkume ịwụ, ihuenyo ịwụ, ngwa coupler, ịwụ ezé na ndị ọzọ na-adị mfe eyi na adọwa akụkụ ahụ mapụtara adabara excavator. Anyị nwekwara ike ịmepụta ụdị bọket dị iche iche dị iche iche dịka ihe ị chọrọ. Anyị Excavator bọket dakọtara na igwe na ọrụ ahụ ma nye ọrụ kachasị mma na ngwa gị. Ma ọ bụ ịgbari okwute, ebe mwube ma ọ bụ ịkọwapụta ala - Bọketị anyị na-egwupụta ihe na-elekwasị anya na ike na arụmọrụ nke igwe na ọrụ ahụ ma rụọ ọrụ nke ọma. Welcome ase na anyị nwere ike ekwe nkwa na kasị ala price na kasị mma.